Imizi engcono kakhulu yaseSpain ongayivakashela ngemoto entwasahlobo | Izindaba Zokuhamba
Izindaba Zokuhamba | 30/04/2021 11:06 | Izindawo zokuvakasha
Thatha ithuba lokuthi amakhaza ayanyamalala kancane futhi amazinga okushisa aya ngokufudumala ngokuvakashela eyodwa amadolobha amahle kakhulu eSpain ukuchitha iholide elimnandi kule ntwasahlobo.
Y… Yini engcono kunokuhamba nemoto yethu? Sifaka i- imigoqo yophahla emotweni yethu nokuzijabulisa kwethu! Ingabe usukulungele ukuthola amadolobha aphezulu kule sizini? Qhubeka ufunde!
2 IVall de Boí, iLleida
3 U-Alicante, uBenidorm
5 ICórdoba namabala ayo ngoMeyi
Yebo kunjalo. IMadrid yidolobha elihle. Kungabanda kakhulu ebusika uma uqhamuka edolobheni elifudumele, futhi kungashisa kakhulu ehlobo uma uqhamuka edolobheni elibandayo. Noma kunjalo, izalwa kabusha futhi iqhakaza entwasahlobo. Ilanga, esivele lifudumele, liyamema hamba buthule emigwaqweni yakhona ebukekayo namapaki anamaqabunga.
Ngentwasahlobo, ungahamba phakathi kwe- Ipaki enhle yomhlalaphansi (qasha isikebhe echibini), hamba ngebhayisikili ngeParque Juan Carlos I noma eMadrid Río. Futhi uma ungazizwa uthanda ukuhamba, sincoma ukuthi ubhukhe uhambo lwedolobha ebhasini lezivakashi ezivulekile ukusizakala ngesimo sezulu esihle noma ulandele umzila osemotweni yakho: Inketho eyonga kakhulu futhi enethezekile!
Futhi kungani kungenjalo khwela emotweni yekhebuli futhi ubabaze inhlokodolobha yaseSpain evela phezulu, ngenkathi ugeza ngemisebe yokuqala yelanga lasehlobo?
Uma kungashisi kakhulu ngaphandle, ungahlala njalo vakashela iRoyal Palace ne-Almudena Cathedral.
IVall de Boí, iLleida
Izinhlobonhlobo zejografi zaseSpain zenza kube nzima ukunquma ukuthi iyiphi indawo engcono ongayi kuyo.
Noma kunjalo, siyakhetha ama-pyrenees ngoba entwasahlobo kusekhona iqhwa eziqongweni eziphakeme kakhulu, okuluhlaza kucacile ezigodini namanzi agobhoza yonke indawo, avumela imifula ukuba igeleze ngamandla. Alukho uhlobo lokuhlunga oludingekayo ngoba amasimu asha ngezimbali zasendle, ilanga liyavela futhi isibhakabhaka siluhlaza ngempela. Izinsuku ziyanda, futhi yonke into iyahlangana ukudala isimo esihle kakhulu.
Sijabulele ne- amadolobhana amancane anezindlu zamatshe, slate kumatayela alo nasezimbizeni zezimbali emawindini, kanye nasemigwaqweni enamajika amaningi nethrafikhi encane.
Intwasahlobo isikhathi esihle kakhulu sokuvakashela iBenidorm. Yize abaningi besho okuhlukile, iqiniso yilokho kungaphezu nje kwelanga nolwandle.
IBenidorm inedolobha elidala elihamba ngezinyawo, elinemigoqo eminingi Bakhonza ama-tapas avela kulo lonke elaseSpain futhi nomoya omkhulu emathafeni. Ngaphezu kwendawo ye-tapas, iBenidorm inezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela ezinikezwayo ikhishi lamazwe omhlaba cishe kuwo wonke amakhona omhlaba.
Ungaphinde uye eMirador de Benidorm, engenye yezimpawu zedolobha futhi exhuma amabhishi amabili. Ukusuka kulo mbono ungakujabulela ukubuka okuhlaba umxhwele kokushona kwelanga nokuphuma kwalo.
IValencia isamukela ngesimo sezulu esishisayo, amasimu alindele ukugcwaliswa kanye nama-paellas amahle kakhulu anganikelwa yiSpain, asanda kulungiswa ematafuleni angaphandle. Ngeke babe khona abantu abaningi njengasehlobo, ngakho sizoba nolwandle ukuze sikwazi ukuhamba ngasogwini futhi mhlawumbe sidle u-ayisikhilimu.
Singaya kufayela le- Idolobha Lobuciko, uzungeze idolobha, uye ku Ingadi Yezitshalo… Futhi okuningi!
ICórdoba namabala ayo ngoMeyi
ICórdoba iyindawo okufanele ubonwe kuyo eSpain ngoMeyi, lapho kuneziphambano zayo zangoMeyi namabala, iminyango nezihlahla zewolintshi eziqhakaza. Uma kuqhathaniswa nanoma iyiphi enye inyanga yonyaka, idolobha ligcwele ukukhanya nombala. Ngaphezu kwalokho, kule nyanga kubanjelwa umncintiswano odumile kaMaystick, futhi izindlu eziningana ezizimele zivula izindawo zabo zokubhalela umphakathi, zigcwele izimbali, imininingwane nokunakwa ngokucophelela kuwo wonke umuntu odlulayo.
I-Mosque-Cathedral edumile emhlabeni izokushiya ungawuvali umlomo, futhi uzulazule ngekota yamaJuda, nambitha ama-tapas ezindaweni zokucima ukoma futhi uthole amanye amagugu afihliwe edolobha, njengeViana Palace ne-Alcazar Gardens, kuyintokozo yangempela. Idolobha elibuyiselwe emuva elinamakhulu eminyaka omlando nokuxubana kwamasiko ahlukahlukene okungeke kukushiye phansi.
Sevilla kuyindawo enhle ngalesi sikhathi sonyaka ye-Ephreli Fair, engenye yezinkundla ze-Andalusi ezihlala kuze kube sentwasahlobo. Izivakashi eziningi zikhetha inhlokodolobha yase-Andalusia ukubaleka kwentwasahlobo ngezimbali ezihlobisa imigwaqo yayo, i- isimo samaholide sabantu baso nobuhle besifunda.
Ukuvakashela imibukiso ye-flamenco eSeville Ngenye yezinto ezibalulekile, kanye nokuhamba ngezikhumbuzo, ukugibela inqola edonswa yihhashi nokunambitha i-gastronomy yendawo. Ezinsukwini ezimbalwa uzokwazi ukwazi konke okwaziyo ngomuzi. Uhambo lwangempelasonto oluya eSeville entwasahlobo luzokwenza uthandane nedolobha futhi luzokwenza ufune ukubuya nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Manje uyazi ukuthi yimaphi amadolobha aseSpain okufanele uvakashele. Uzoqala kuphi uhambo lwakho lomgwaqo? Khumbula ukuthi kuzofanela uvumelane nemithetho ebekwe yisimo esiphuthumayo seCovid-19. Thola ngemithetho yomphakathi ngamunye futhi ujabulele lolu hambo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindawo zokuvakasha » Imizi engcono kakhulu yaseSpain ongayivakashela ngemoto entwasahlobo